कोरोना 'माफिया'को गोरख धन्दा पछि लागेर लुक्ने, भाग्ने,डराउने भन्दा हातेमालो अहिलेको आवश्यकता - लोकसंवाद
भर्खरै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नयाँ 'फरमान' जारी गरेको छ। डब्लुएचओका आपत्कालीन कार्यक्रम प्रमुख डा. माइक रायनले कोरोना भाइरस पूर्ण रुपमा नष्ट गर्न वा त्यसबाट पूर्ण रुपमा मुक्ति पाइन्न भन्ने विचार व्यक्त गरेका छन् ।
जेनेभामा भएको अनलाइन पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘अहिले जस्तो अवस्था देखिएको छ, त्यसलाई हेर्दा यो लाग्दैन कि यस भाइरसलाई पूर्ण रुपमा निर्मूल गर्न सकिन्छ ।’
यसैगरी केही दिन पहिला कै कुरा हो, यसै संस्थाले कोरोना भाइरस 'एयरबोर्न' (हावाबाट प्रसारित हुने ) भएको चेतावनी जारी गरेको थियो। सुनेको थिँए- विभिन्न ३२ देशका २०० भन्दा बढी डाक्टर र वैज्ञानिकहरूले कोरोना भाइरस 'एयरबोर्न' भएको अनुसन्धान गरेर डब्लुएचओलाइ सूचित गरेका थिए र यसलाई 'एयरबोर्न' घोषणा गर्ने अनुरोध वा दबाब दिएका थिए।
अहा कति ठुलो अनुसन्धान ! कति ठुलो कुरा पत्ता लाएछन् !! गत नोभेम्बरदेखि मानिसबाट मानिसमा बिना कुनै 'सेक्सुअल कन्टेक्ट' प्रसारित भइरहेको भाइरसलाई ७-८ महिना पछि आएर यी महाशयहरूले 'एयरबोर्न' भएको पत्ता लगाए । कोरोना एचआइभी झैँ 'सेक्सुअल' सम्पर्कले सर्छ कि सर्दैन अझै स्पष्ट छैन। यो सर्ने नै स्वास प्रश्वासका माध्यमले हो। सङ्क्रमित व्यक्तिले बोल्दा, खोक्दा, हाच्छयूँ गर्दा, उसको थूक, खकार, राल, सिँगान जस्ता 'फ्ल्यूड' का माध्यमले हो । वीर्य र रगत जस्ता 'फ्ल्यूड' ले सङ्क्रमण प्रसार हुने कुरा अहिलेसम्म प्रकाशमा आएको छैन ।
आत्मबलभन्दा बढी शक्तिशाली अन्य कुनै औषधि अथवा उपाय छैन। मैले कोरोना पचाई सके, म कोरोना पचाउन सक्षम छु यस विश्वासले तपाईँलाई कुनै पनि औषधि अथवा उपायभन्दा सजिलो गरी कोरोनाबाट बचाउने छ । रुघा लागे मा अथवा घाँटीमा कुनै किसिमको असहजता भएमा दूधमा बेसार हालेर (प्रधानमन्त्री भनेकोले अविश्वास नगर्नुस्) सेवन गर्नुस्, तातो पानी चिया विभिन्न आयुर्वेदिक काढ़ा सेवन गर्नुका साथै यस्तो बेलामा 'कुंजल' गर्दा अति नै फाइदा हुने गरेकाे छ ।
सङ्क्रमित व्यक्तिले बोल्दा, खोक्दा, हाच्छयूँ गर्दा निस्केका 'ड्रापलेट' (थूक ,खकार राल का सूक्ष्म कण) माथि सवारी गरी कोरोना भाइरस आफ्नो बास स्थान (सङ्क्रमित व्यक्तिको शरीरबाट) बाट नयाँ साम्राज्यको खोजीमा 'मार्च' गर्छ। यदि पृथ्वीमा हावा नहुँदो हो भने यी साना कण धेरै भए २० सेन्टिमिटर मै धूलिसात हुन्थे। जति सूक्ष्म भए पनि, जति थोरै भार भए पनि गुरुत्वाकर्षणले यिनलाई २० अथवा ३० सेन्टिमिटरभन्दा पर जाने अनुमति दिने थिएन । डब्लुएचओको निर्देश अनुसार ३ फिटको दुरी कायम गर्नु पर्ने सुझाव दिएको थियो । त्यसले नै कोरोना भाइरस 'एयरबोर्न' भएको प्रमाणित गरेको थिएन र ? 'ड्रापलेट' ३ फिटसम्म बिना हावा त पुग्न सक्दैनन्। सात महिना पछि यो नयाँ नाटक किन ?
यस नयाँ गेमका पछाडि धेरै ठुलो कारण छ। बिस्तारै आएर संसार भरीका मानिसमा कोरोनाको त्रास कम हुँदै गइरहेको छ। त्रास कम हुँदै जानाले मृत्यु दरमा कमी आउनुका साथै 'रिकभर' हुनेको प्रतिशत ६०-६५ (विभिन्न देश अनुसार) प्रतिशत पुग्यो। यसरी त्रास कम हुँदै गयो भने 'रिकभर' हुनेको प्रतिशत दिन दिनै बढ्दै जान्छ। अन्ततः कोरोना रुघा खोकीको भाइरस झैँ सामान्य भाइरसमा रूपान्तरित हुन्छ। जसले कोरोनाको साजिश गरेका छन्, जो जो यसका मतियार बनेका छन् तिनका लागि यो सुखद कुरा कसरी हुनसक्छ ? संसारभरी यसको त्रास कायम राख्नु छ, अझ बढाउनु छ। यसकै नयाँ कडीका रूपमा कोरोना भाइरस 'एयरबोर्न' भएको स्थापित गरिँदै छ। यो प्रारम्भदेखि नै 'एयरबोर्न' थियो , यो कुरा लामाे समयसम्म लुकाइयो, जब यसको त्रास कम हुँदै गइरहेको छ, यो कुरा प्रकाशमा ल्याएर पुनः त्रास स्थापित गर्ने कुचेष्टा हुँदैछन्।
संसारभरी १५० भन्दा बढी कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन निर्माण कार्य भइरहेका छन्। यस्तो एउटा भ्याक्सिन विकास गर्ने प्रक्रियामा करोडौ‌ं डलरको धन निवेश भइरहको छ। गणित बुझ्नुस् कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन हेतु अरबौं डलर लगानी भइसकेको अवस्थामा कोरोना यदि आफै भुत्ते साबित भयो भने त्यो अर्बौं डलरको निवेश कसरी उठ्छ ?
कोरोनाबाट अहिलेसम्म संसारमा जति मानिसको मृत्यु भएका छ त्यसबारे दुई 'पार्ट' मा विश्लेषण गरिनुपर्छ। मृत्युवरण गर्ने मध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी कोरोना अथवा अन्य शारीरिक दुर्बलता र अशक्तताले नभई कोरोनाको नाममा फिँजाइएको आतङ्क ,त्रास ,हौवाका कारण मरेका छन्। मानसिक रूपमा व्यक्तिलाई पङ्गु बनाई दिएपछि व्यक्ति काँडाले घोच्दा, सर्पले टोकेको सम्झेर आफ्नो इहलीला आफै‌ं समाप्त गरिरहेछ । शरीरमा विष पस्नु पर्दैन । कोरोना खतरनाक छँदै थिएन, हुँदै होइन, हो यसका नाममा फिँजाइएको आतङ्क खतरनाक थियो र, छ ।
दोस्रो तथ्य कोरोनाको नाममा मृत्यु हुनेको हुलमा राखिएका अधिकांश व्यक्ति कोरोना सङ्क्रमणले नभई पहिलादेखि आफ्नो शरीरमा रहेको अन्य बिमारीले मरेका हुन । संसारभरी कोरोना सङ्क्रमणकै कारण मर्नेहरूको सङ्ख्या १ प्रतिशत पनि छैन । कुनै साख नभएका कारण नेपालका प्रधानमन्त्री भनेको कुरा कसैले पत्याएन । उहाँले भनेकै हो, नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु भएको जुन सङ्ख्या भनिँदै छ ती कोरोनाका कारण मरेका होइनन्, अन्य कारणले मरेका हुन् । आश्चर्य लाग्छ उहाँको यस स्वीकारोक्तिमा कसैले चासो नै देखाएनन् ।
साना साना कुरामा सरकार माथि मुद्दा हाल्न पर्खिरहेका प्राणीहरूले पनि यस कुरामा होस पुर्‍याउन सकेनन् । प्रधानमन्त्री माथि सिधै मुद्दा लाग्दैन र ? उहाँ संसदमै बोल्नुहुन्छ कोरोनाबाट नेपालमा मरेको व्यक्तिको तथ्याङ्क गलत हो । तर त्यो तथ्याङ्क त उहाँ अधीनकै मन्त्रालयले जारी गर्छ र गरिरहेकाे छ । उहाँ मात्रै होइन उहाँको पूरा सरकार नै मिथ्या काममा सरिक भइरहकाे छ ।
अब हेर्नु होला केही दिनभित्रै अर्को हल्ला फिजाइनेछ -कोरोनाको 'कम्युनिटी ट्रांस्मिसन' भयो भनेर। जसरी भए पनि आतङ्क जारी राख्नु छ । यो शब्द हो के 'कम्युनिटी ट्रांस्मिसन' 'कम्युनिटी'बाट कम्युनिटी फैलिने । अहिलेसम्म के कोरोना मङ्गल ग्रहबाट आएको व्यक्तिबाट सर्दै थियो ! कम्युनिटी हो के, व्यक्तिको समूह होइन र ? । एउटा घरमा २ जनालाई सङ्क्रमण छ, एउटा टोलमा १० जनालाई सङ्क्रमण छ, एउटा सहरमा १००० जनालाई सङ्क्रमण छ । के यी 'कम्युनिटी' भित्र पर्दैनन् ?
केही दिन पहिला नेपालका कोरोना दलालहरूले काठमाडौँका ढलमा पनि कोरोना फैलियो भनेर आतङ्क सिर्जना गरे । खुबै कसैको इसारामा यी ढलमा कोरोना टेस्ट गर्न पसेका हुन् । हुन त अहिले नेपालमा चीनमै बनेको सिक्का चल्छ। यस पंक्तिकारले फेब्रुअरी महिनामै asymptomatic कोरोना सङ्क्रमित रोगीको मलमा कोरोना भाइरस पाइएको बारे लेखेको थियो ।
मानव मलमा भेटिएको भाइरस अब ढलमा भेटिंदा यिनको जागिर पाकेकै पक्कै हो । अब यिनले नै 'कम्युनिटी ट्रांस्मिसन' को हल्ला गर्नेछन् ।
एकछिनकाे लागि ल डब्लुएचओ कै विश्वास गरौँ - कोरोना भाइरस समाप्त हुँदैन, यसलाई समाप्त पार्न सकिँदैन । त्यसो भए 'लकडाउन' किन ?, 'क्वारेनटाइन' किन ? 'सोसल डिस्टेंसिंग' किन ?, मास्क किन र समग्रमा कोरोनाबाट जोगिने किन र कति दिन ? रुघा खोकीको भाइरस झैँ यो पनि अजम्मरी छ भने तिम्रा समस्त नाटक किन ? बरु जति चाँडै होस कोरोना सङ्क्रमण, त्यै राम्रो होइन र !
तिम्रो तथ्याङ्क १ कराेड २६ लाख ६४ हजार ६ सय ९५ जना सङ्क्रमित मध्ये ७३ लाख९५ हजार ३ सय ७८ जना व्यक्ति (२०७७ असार २७ गते शनिवार बेलुकी ७ बजे सम्म) 'रिकभर' भई सके। संसार भरी ५८ प्रतिशत व्यक्ति स्वस्थ भइसके। ५ लाख ६२ हजार ७ सय १६ अर्थात् ४ दशमलव ४५ प्रतिशत व्यक्तिको मृत्यु भइसक्यो । संसारभरी 'एक्टिभ' सङ्क्रमित सङ्ख्या ४७ लाख ५ हजार ६ सय १ मात्रै छ । दिनमा डेढ लाख नयाँ रोगी थपिँदै छन् भने निको हुनेको सङ्ख्या १ लाखभन्दा माथि रहेको छ । तर सङ्क्रमित सङ्ख्या करोड प्रचारित गरेर सामान्यजनमा त्रास फैलाउने क्रम जारी छ । कुन संस्था, कुन मिडियाले ७३ लाख ९५ हजार व्यक्ति स्वस्थ भएको तथ्याङ्क 'हाइलाइट' गरेको छन् ?
मलाई सोध्नु हुन्छ भने विश्वको जनसङ्ख्या ७ अरब ८० करोडको कुल ० दशमलव १६२ प्रतिशत मानिस (१कराेड २६ लाख ६ सय ९५) लाई कोरोना सङ्क्रमण भएको छ । यी मध्ये ५८ प्रतिशत व्यक्ति स्वस्थ भइसकेका छन्, जम्मा ४ दशमलव ४५ प्रतिशत मरेका छन् । स्वस्थ हुनेको प्रतिशत दिनहुँ बढ्दै गइरहेको छ । कोरोना सङ्क्रमणका कारण व्यक्ति मर्दैन, यस सङ्क्रमणले गर्दा तपाईँभित्र कुनै पहिलादेखि कुनै गम्भीर रोग छ भने तपाईँले सङ्क्रमण लागे पछि चनाखो हुनुपर्छ। विश्वभरीका मीडिया, सरकारी संयन्त्र र विभिन्न संस्थाले एक महीना यसरी प्रचार गरी दिए कोरोनाको घातकता छूमंतर हुन्छ।
कोरोनाको नाममा मृत्युवरण गर्नेको प्रचारित सङ्ख्या जुलाई १ देखि १० सम्म- जुलाई १-२ -३-१० क्रम बमोजिम ४८५५+ ५१६४+५१८८ +४५३७ +३६०७ +३५७७ +५५०८ +५५०७ +५४०० +५४१६ = ४८७५९ रहेको छ । प्रतिदिनको औसत ४८७५ व्यक्ति रहेको छ ।
कोरोनाभन्दा पहिला विश्वको प्रति मिनेटको मृत्यु दर १०६ जना प्रति मिनेट रहेको थियो । कोरोना सङ्क्रमणबाट मर्नेहरूमा सबैजना यी १०६ प्रति मिनेट भन्दा पृथक् होइनन् । कोरोनाले बूढ़ाबूढ़ी, कमजोर, दीर्घरोगी, क्रोनिक रोगग्रस्तलाई नै बढी मात्रामा सिकार बनाई रहेको सर्वविदित नै छ । कोरोनाकै कारण मर्नेको प्रतिशत १० भन्दा माथि छैन । भनौँ औसतमा प्रतिदिन मर्ने ४ हजार ८ सय ७५ मध्ये १० प्रतिशतले अर्थात् ४ सय ८७ जना व्यक्ति कोरोनाका कारण मरेका छन् । २४ घण्टामा १ हजार ४ सय ४० मिनेट हुन्छ । कोरोनाका कारण एक मिनेटमा मर्ने व्यक्तिको सङ्ख्या हुन आउँछ ० दशमलव ३३ अर्थात् तीन मिनेटमा एक जना ।
विश्वमा प्रति मिनेट नयाँ जन्मिने शिशुको सङ्ख्या २५० प्रति मिनेट रहेको छ । यसको अर्थ कोरोनाभन्दा पहिला विश्वको जनसङ्ख्या प्रतिमिनेट १४४ का दरले वृद्धि भइरहेको थियो । १२-१३ वर्षमा एक अरब खाने मुखको वृद्धि । कोरोनाले पनि विश्वको बढ्दो जनसङ्ख्यामा कुनै प्रभाव पारेको छैन । एक मिनेटमा कोरोनाले भइरहेको ० दशमलव ३३ को सङ्ख्यालाई १ नै मान्ने हो भने पनि प्रतिमिनेट मर्नेको सङ्ख्या १०७ हुँदा पनि प्रतिमिनेट १४३ जनाको दरले वृद्धि भइरहेको छ । ६ महिने 'लकडाउन' को असरबारे आउने ६ महिनामा ज्ञात हुने नै छ !
सरकारले केही गर्दैन । माफियाले कोरोनाको आतङ्क र त्रास जसरी भए पनि फिँजाइ राख्नु छ । त्रासका नयाँ नयाँ ढङ्ग प्रचारमा ल्याइन्छन् । तपाईँले यस गोरख धन्दाबाट आफैं जोगिनु पर्छ । कोरोनाबाट लुक्ने, भाग्ने, डराउने कामले तपाईँलाई मानसिक रूपमा कमजोर बनाउँछ । डब्लुएचओ कै विश्वास गर्नुस् ,कोरोना समाप्त हुँदैन भने तपाई कति दिन मास्क लगाएर जोगिन सक्नु हुन्छ ? 'रेगुलर' मास्क प्रयोग गर्नुकाे खतरा कोरोनाभन्दा धेरै छ, कुनै डाक्टरसँग सोधी हेर्नुस् । विश्वास गर्नुस् नेपालमै कोरोना सङ्क्रमित भएर थाहै नपाई परीक्षणसम्म नपुगी हजारौं हजार व्यक्ति निको भइसके ।
अहिलेसम्म नेपालमा ३ लाख व्यक्तिको पनि कोरोना परीक्षण भएको छैन । यसरी निको हुने व्यक्तिमा आफू पनि रहेको विश्वास गर्नुस् । आत्मबलभन्दा बढी शक्तिशाली अन्य कुनै औषधि अथवा उपाय छैन । मैले कोरोना पचाई सकें, म कोरोना पचाउन सक्षम छु यस विश्वासले तपाईँलाई कुनै पनि औषधि अथवा उपायभन्दा सजिलो गरी कोरोनाबाट बचाउने छ । रुघा लागेमा अथवा घाँटीमा कुनै किसिमको असहजता भएमा दूधमा बेसार हालेर (प्रधानमन्त्री भनेकोले अविश्वास नगर्नुस्) सेवन गर्नुस्, तातो पानी चिया विभिन्न आयुर्वेदिक काढ़ा सेवन गर्नुका साथै यस्तो बेलामा 'कुंजल' गर्दा अति नै फाइदा हुने गरेकाे छ । 'कुंजल' कसरी गर्नेबारे कुनै योगाचार्य अथवा युट्युबबाट सजिलोसँग थाहा पाउन सकिन्छ । यसबाट सम्भव नभए 'कुंजल' सिक्नका लागि मसँग जीमेलमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।